Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga iyo mudane Xaaji Ciraaqi
Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga iyo mudane Xaaji Ciraaqi
Weli waxaa inoo socda taxanihii aan kaga hadlaynay isbadalka taariikhiga ah ee Halganka Shacabka Somalida Ogadenya uu galay. Kaasoo aan ku sheegnay in markii ugu horeysay taariikhda umadda Somaliyeed ay 3ex jiil ku kulmaan halgan socda oo taabagal ah.
Waxaan soo sheegnay in ay tahay taariikh mudan in lagu faano isla marahaantaana laga feejignaado khataraha ka iman kara anagoo ogsoon inuu cadawgeena ku dadaalayo inuu fashiliyo taarrikhdan cusub ee umadeena u bilaabatay, waxaana hubaal ah inuu ku dadaalayo si aanay u dhex marin isfaham iyo wada-shaqayn facaadadda halganka isku soo gaadhay si aanan u gaadhin hadafka aan hiigsanayno oon loo dhaafin kobta aan taaganahay.
Mudane Xaaji Ciraaqi sidaan uga baranay wuxuu ka xogwaramayaa qaar ka mid ah xaaladihii uu CWXO ka soo gudbay iyo marxaladihii ugu adkaa ee lasoo gudboonaaday. Ujeedada uu ka leeyahayna siduu sheegay waa inuu dhaxalka uu hayo iyo waaya-aragnimadiisa gaadhsiiyo dhalinyarada laga doonayo inay halganka la wareegaan iyagoo fahamsan taariikhda halgankooda iyo marxaladihii laga soo gudbay say uga feejignaadaan in aanay dib ugu noqonin raadkii 20 sano kahor laga soo gudbay.
Xusidda taariikhda oo halkeeda inooga sii socon doonta, iyadoo ujeedadeenu tahay inaan isku xidhno shalay iyo maanta saan ugu gudbino halganka facaadii hogaamin lahayd, waxaan ka codsanaynaa halgamaaga daawanaya inay si fiican u dhagaystaan waribixinta Xaaji Ciraaqi una dulqaataan waqtiga. Waxaa hubaal ah inay taariikh badan ka heli doonaan dhowr jeerna ay kusoo ceshan doonaan.
Wixii su’aal ah ama tala bixin ah noogu soo hagaajiya cinwaankii barnaamijka ee ahaa:
La socda Arbacada.